ဒီတပတ် English American-style Idioms ကဏ္ဍမှာ Philadelphia မှာမကြာမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီ (Democratic Party) ညီလာခံမှာ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေမှာထည့်သွင်းသုံးနှုန်းခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ To pass the baton, A piece of cake နဲ့ Give meabreak တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) To pass the baton
To pass (လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာ)၊ the baton (တုတ်တို) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံး တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတုတ်တိုကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ the baton က သာမန်တုတ်တို မဟုတ်ပါဘူး။ Relay လက်ဆင့်ကမ်းအပြေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ အပြေးသမားတွေ တဦးနဲ့တဦး လက်ဆင့်ကမ်းပေးရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ တုတ်တိုကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အီဒီယံအသုံးကတော့ ရာထူးတာဝန်ကို လက်ဆင့်ကမ်း လွှဲပြောင်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ သမ္မတသက်တမ်း (၂) ကြိမ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ သမ္မတ Obama က သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးသမ္မတသက်တမ်း ပြီးဆုံးခါနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ နောက်တက်မယ့် သမ္မတအဖြစ် ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့  သမ္မတလောင်း Hillary Clinton ကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ Obama ပြောကြားခဲ့တာက၊
အခု ကျနော်အနေနဲ့ ရာထူးတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ နဲ့ သာမန်နိုင်ငံသားတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
(၂) A piece of cake
A piece (အပိုင်းတပိုင်း)၊ of cake (ကိတ်မုန့်ရဲ့ ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကိတ်မုန့်ရဲ့  အပိုင်းတပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်ဆိုတာက အရသာရှိလှတဲ့အတွက် လူတိုင်းနှစ်ခြိုက်တာမို့ ၊ ကိတ်မုန့်တပိုင်းစားရသလိုဆိုပြီး တင်စားပြောတဲ့ဒီအသုံးရဲ့အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာ သိပ်ကိုအခြေအနေကောင်းတာ၊ လုပ်ဖို့က လွယ်ကူတာ၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တာ၊ လျှောလျှောရှုရှု အခက်အခဲမရှိ လုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးကို ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတဟောင်း Bill Clinton က သူ့ဇနီး Hillary Clinton အနေနဲ့ နောက်တက်မယ့် သမ္မတ ဖြစ်ထိုက်ကြောင်း ထောက်ခံပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ Hillary Clinton ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Dorothy Rodham အနေနဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝက ချို့ ချို့ တဲ့တဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို သူ့ငယ်စဉ်ဘဝနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတဟောင်း Bill Clinton ပြောကြားသွားတာကတော့၊
She hadachildhood that made mine look likeapiece of cake!
သူ့ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝနဲ့စာရင်ကျနော့်ရဲ့  ငယ်စဉ်ဘဝက အများကြီးတော်သေးတာပေါ့။
(၃) Give meabreak
“Give meabreak” အသုံးကို ဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံမှာ ဒုသမ္မတ Joe Biden က သူ့ မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Give (ပေးပါ)၊ me (ကျနော်၊ ကျမ)abreak (သက်ညှာမှု) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကျနော် (သို့ ) ကျမကိုသက်ညှာမှုပေးပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သက်ညှာမှုဆိုတာကတော့ နားမှာကြားရတာ မဟုတ်မဟတ် လုပ်ဇာတ်တွေ ဖြစ်တာမို့ နားချမ်းသာမှုပေးပါကွာလို့ ပြောတာမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ အီဒီယံရဲ့  သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကမြန်မာဘန်းစကားမှာ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ ရပ်ပါတော့ ၊ တော်စမ်းပါ ၊ အပိုတွေ ၊ မဟုတ်မဟတ်တွေလာမပြောနှင့် ပေါက်ကရတွေ လာမပြောနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ လာမပြောနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကိုဒုတိယသမ္မတJoe Biden က ရီပတ်ဘလင်ကန် သမ္မတလောင်း Donald Trump ကိုသူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ရည်ညွှန်းပြောခဲ့တာကတော့ ၊
He's trying to tell us he cares about the middle class. Give meabreak!
သူ့ဟာလူလတ်တန်းစားတွေအရေးအလေးထားပါတယ်လို့ကျနော်တို့ ကိုသူကပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေပါဗျာ။
ဒီသတင်းပတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ အီယံအသုံးတွေက ဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ To pass the baton, A piece of cake နဲ့ Give meabreak တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Election အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂)
Election အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၃)